Miseensonni paartii ABIN'fi 'Baaladaraa' Shororkeessummaan shakkamuun hidhaa turan gadhiifama - BBC News Afaan Oromoo
Miseensota ABIN fi Mana Maree Baala Adaraa
Gaggesitootniifi deeggartoonni Paartii Warraaqsa Biyyaalessaa Saba Amaaraa ABIN 14 hiikamuu abukkaattoon paartichaa Obbo Aabberee Mangistee BBCtti himan.
Yaalii Fonqolcha Mootummaa Waxabajji 15 naannoo Amaaraa FI Finfinneetti yaalame keessaa harka qabu jedhamuun shororkeessummaan shakkamuun ture kan hidhaman.
Namoonni gadhiifaman gariin wabii qarshii 5,000 hanga 10,000 qabsiisuun kaan ammoo waraqaa eenyummaa isaniin akka tahes himaniiru.
Obbo Aabbereen akka jedhanitti himanni isaanirratti dhiyaates hin jiru.
''Hoggantoota gidduugaleessati kan hiikaman. Bakka garaagaraa irra kan hojjechaa turanidha.
Ammas namootni 8-9 tahan hin bane. Himannis isaan irratti hin dhiyaane.
Murtoo kana kan argatan keessaa namoonni shan yeroodhaaf waan hin mallattofneef achuma turan,'' jechuun kaleessa BBCtti himaniiru.
Oduu gadhiifamuu isaanii kaleessa sa'a booda dhagahuu kan himan Obbo Aabbereen, dubbii himaan ABIN Obbo Kiristaan Taaddalee irratti himanni akka dhiyaatuuf guyyaan dabalataa kenname 15 Jimaata dhufu waan xumuramuuf himanni kan irratti dhiyaatu miti taanaan gaafa Jimaataa ykn sanas dursee gadhiifama jennee abdanna jedhan.
Dabalataan haatiwarraa Itti-gaafatamaa Biiroo Bulchiinsaaf Nageenyaa Naannoo Amaaraa duraanii Jeneraal Asaamminoo Tsiggee Aaddee Dastaa Asaffaa mana hidhaatii gadhiifamuus abukkaattoon isaanii himaniiru.
Oduu wal fakkaatu biraan ammoo miseensonni ''Mana Maree Baaladaraa'' jechuun of waamuu gadhiifamuu abukkaattoon namoota gadhifamanii Obbo Heenook Akiliiluu BBCtti himaniiru. Abukaattichi akka jedhanitti;
''Haal-dureen kennameefii tokko iyyuu hin jiru. Himannis irratti hin banamne.
Buufata poolisiitti waraqaa eenyummaa isaanii qabsiisaniiti kan bahaa jiran.
Ajaja mana murtiis tahe ajaja abbaa alangaatiinis miti kan gadhiifaman.''
Namoota gadhiifaman keessaa tokko kan tahan dubbii himaan 'Mana Maree Baaladaraa ' ofiin jedhuu Obbo Sintaayyoo Chekkol har'a gadhiifamnus gaaffiin keenya hanga deebii argatutti qabsoo keenya itti fufnaa jedhan.
Himanni nurratti baname hin jiru kan jedhu, Sintaayyoon abbaan alangaa himata akka banuuf yeroon kennameefii ture jedha.
Sintaayyoon yeroo beellamaa dursuun akka bahe dubbachuun ji'a lama dukkana keessattidha hidhamnee kan dabarsine jedhe.
''Gaaffii keenya cabsuufidha kan nu hidhan. Gaaffiin keenya hanga hin deebinetti gadhiifamuun keenya hiika hin qabu.
Gaaffiin magaalaa Finfinnee gaaffii uumata Itoophiyaati.
Gaaffiin haqaafi dimokiraasiif uummanni Finfinnee qabsaa'eef hanga hin deebinetti yeroo 100 mana hidhaatti dedebina malee har'a hiikamne jennee boru qabsoo keessaa kan baanu miti.''
Mana hidhaattis mo'attota taaneeti kan bane. Xiinsammuun keenya hin miidhamne. Uummatni dhufee nu jajjabeessaa ture,'' jechuun BBCtti dubbate.
Sintaayyoon hidhamuu keessattis isaan mo'anneerra jedhee, hiikamuukoof anatti homtuu natti hin dhagahamne jedhe.
''Sababni isaa ana malee gaaffiin koo hin furamne.''
Haleellaa Waxabajji 15 bara 2011 naannoo Amaaraafi magaalaa Finfinneetti gaggeeffameen hoggantootni ol-aanoon lubbuu dhabaniiru.